Madaxdii gobolka Tigrey-ga oo qaylodhaan u dirsaday Midawga Afrika | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxdii gobolka Tigrey-ga oo qaylodhaan u dirsaday Midawga Afrika
Madaxdii gobolka Tigrey-ga oo qaylodhaan u dirsaday Midawga Afrika
Hogaamiyaha gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya ayaa ka codsaday midowga Afrika in ay soo fara galiyaan si loo joojiyo in dalku u dhaqaaqo dhankaa iyo dagaal sokeeye.
Hadal telefishanka laga sii daayay ayuu Debretsion Gebremichael ku sheegay in Tigray ay sii wadi doonto inay isdifaacdo ilaa dowladda federaalka ay ogolaato inay wadahadlaan.
Laakiin ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed, wuxuu sheegay in xadgudubyo isdaba joog ah oo ay sameeyeen hoggaamiyeyaasha gobolka Tigray ay ku riixday inuu qaado tallaabo militari.
Wararka naga soo gaadhaya gobolka dariska la ah ee Amxaarada ayaa sheegaya in 100 askari oo katirsan ciidamada federaalka laga dawaynayo dhaawacyo.
Mar sii horeysay, Mr Abiy isagoon wax sharaxaad ah ka bixin wuxuu shaqada ka ceydhiyay taliyihiisa ciidanka, madaxii sirdoonka iyo wasiirkii arrimaha dibada.
Taliyaha cusub ee ciidanka Berhanu Jula ayaa sheegay in ciidamada federaalku ay qabsadeen afar magaalo oo kuyaala galbeedka Tigray.
Jimcihii ayaa ra’isal wasaaraha dalka, Abiy Ahmed, sheegay in milatariga dalku qaaday weerarro cirka ah oo uu ku burburiyey xarumaha saanaddu u taal maamulka gobolka, waxaanu sheegay in weerarro kale la qaadi doono.
Xukuumadda Abiy ayaa ku eedaysay xoogaga gobolkaas ee u daacadda ah xisbiga TPLF ee talada gobolka hayey tan iyo horaantii sagaashamaadkii, in ay weerarro ku qaadeen saldhig milatari oo gobolkaa ku yaal iyo sidoo kale goobo ka tirsan gobolka la deriska ah ee Amhara.
“Duqeyntii diyaaradaha waa la fuliyey welina wey socotaa, duqeymahaasina waxaa loo fuliyey si loo wiiqo awoodda cadowga. Meelo ka mid ah deegaanka Tigray gaar ahaanna agagaaraha magaalada Maqale waxaa ku kaydsan gantaalo aad u badan gantaladaasi oo ay riddadoodu gaadhi karto 300 oo km, markaa si aanay kooxdan fallagada ahi ay u isticmaalin, annaga oo ka duuleyno xogaha naga soo gaadhay Maqale ee ahaa iney tijaabo wadaan ay gantaalladaasi u isticmaalaan, ayaanu si aan waxyeellada ka iman karata uga hortagno waxaan gabi ahaanba burburinnay raadarradii iyo gantaalaha riddada dheer ee halkaasi ku keydsanaa, balse duqeymaha dhinaca cirka ee la fuliyey ma ahayn kuwo lagu beegsaday goobo shacab.” Ayuu yidhi ra’isal wasaare Abiy oo ka hadalay amarkii uu ku bixiyey in la duqeeyo goobo ku yaal gobolka Tigray.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in howlgalka milateri ee laga bilaabay gobolka Tigray looga gol leeyahay in lagu soo af-jaro “isla xisaabtan la’aanta ka jirta gobalkaas”.
Abiy Ahmed waxa kale oo uu intaa ku daray in ay ma huraan tahay in hogaamiyaasha siyaasadeed ee gobolkaa maxkamad la soo taago oo lagula xisaabtamo “xasilooni darrada ay halkaa ka abuureen.”Xigasho Bbc Somali
Previous articleXoghayaha cusub ee Xisbiga Kulmiye oo xilka la wareegay
Next articleDuuliye Axmed Dheere iyo Xaquuqda Aadamaha